Daroogooyinka Wadooyinka ee sunta leh ee loo yaqaan 'Benzos' waxay u horseedeen dhimasho badan • Dawooyinka Inc.eu
La-taliye xagga siyaasadda daroogada ah oo ka socda magaalada Vancouver ayaa ka digaya daroogooyinka waddooyinka halista ah ee buuxiya badeecada sharci-darrada ah ee British Columbia si la mid ah tii ay fentanyl sameysay dhowr sano ka hor.
Karen Ward ayaa sheegtay in benzodiazepines, ama benzos, ay ka dhigayaan xad dhaafka dawooyin badan maxaa yeelay badanaa waxaa lagu daraa opioids. Benzos kama jawaabaan naloxoon, daaweyn ka noqoshada xad dhaafka ah. Tirokoobyada ay soo saartay Adeegga Coroners BC khamiistii ayaa muujinaya in 158 qof ay u dhinteen kuwa sunta ah bishii la soo dhaafay daroogooyinka, taasoo ka dhigeysa wadarta tirada dhimashada ee xad dhaafka ee xad dhaafka degmada tan iyo bilowgii sanadka ilaa 498.
Dawooyinka waddooyinka wasakhaysan
Dhimashadu waxay sidoo kale calaamadeysaa bishii seddexaad oo toos ah oo in ka badan shan qof maalin kasta ugu dhintaan daroogada sharci darrada ah ee gobolka. Adeeggu wuxuu sheegay in isticmaalka dawooyinka dajinta ee ay ku jiraan benzodiazepines lagu aqoonsaday 51 boqolkiiba dhimashada bishii Febraayo. Isticmaalka xad dhaafka ah ee daroogada iyo daawooyinka ay kujiraan benzodiazepines waa dhibaato weyn oo kadhalatay fentanyl dhowr sano kahor. Su’aashu waxay tahay dhibaatadan ma waxay ku sii fidi doontaa adduunka intiisa kale?
Akhri wax dheeraad ah ckpgtoday.ca (Source, EN)
Tijaabadii ugu horeysay ee caafimaad ee xashiishadda sida daaweynta dhanjafka ayaa bilaabatay
Daraasadda ugu horreysa ee lagu xakameynayo placebo waxay baareysaa in alaabada xashiishka, sida THC iyo CBD, ay sababaan madax-xanuun daran ...
Boqolaal shirkadood oo Nederland ah ayaa shaqaalaha u tijaabiya isticmaalka daroogada waxayna ku xadgudbaan qawaaniinta u gaarka ah. Taasi waxay ka muuqataa…
Dhibaatada Vaping ee Mareykanka waxay saamaysaa saamiyada xashiishadda
Mareykanka - Saamiyada shirkadaha ayaa hoos u dhacay iyadoo laga cabsi qabo caafimaadka qiiqa ...